Ndị ọrụ ugbo nke mpaghara Novgorod tụlere mmepe mkpụrụ osisi nduku - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Ndị ọrụ ugbo nke mpaghara Novgorod tụlere mmepe mkpụrụ osisi nduku
Onye minista na -ahụ maka ọrụ ugbo nke mpaghara ahụ Elena Pokrovskaya na ndị ọrụ ugbo mpaghara na -enwe nzukọ ọmụmụ ihe na -abụghị isiokwu "Mmepe nke mkpụrụ nduku na mpaghara Novgorod." A haziri nzukọ a n'ọhịa nke onye ọrụ ugbo Anatoly Lipatov na mpaghara Shimsky. Ọ nọla na -akụ mkpụrụ nduku nke mkpụrụ akwụkwọ dị elu ruo ọtụtụ afọ ma dị njikere ịkekọrịta ahụmihe ya.
Dị ka ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọrụ ugbo nke mpaghara ahụ siri kwuo, e nwere ugbo mkpụrụ akwụkwọ ise a gbaara ezi àmà na mpaghara maka imepụta mkpụrụ nduku. N'afọ gara aga, ha mepụtara ihe karịrị tọn puku isii nke ọkaibe na mkpụrụ izizi (na 2019 - puku tọn 5,5). Ugbo anọ - ugbo ugbo ala nke Denis Pavlyuk, Anatoly Lipatov, Nikolai Kolesnikov na Ivan Geletey - na -etinye aka na mmepụta mkpụrụ mbụ, na -eto minitubers nduku site na microplants (meristems). A na -akwado microplant n'ụlọ nyocha dabere na alaka ụlọ ọrụ Federal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" na mpaghara Novgorod.
Onye isi ngalaba ahụ, Andrei Matov, kwuru na taa abawanyela ike ụlọ nyocha ahụ rue puku mkpụrụ iri puku iri. A na -emepụta ụdị poteto iri na atọ. N'ime nhọrọ ụlọ, ụdị ndị kachasị ewu ewu bụ Aurora, Krepysh, Charoit, Sineglazka, Vasilek na Violet. A kụrụ puku microplant 50 (na 13 - puku iri abụọ na ise) n'ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ubi mkpụrụ osisi, ndị ọzọ - n'ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke alaka ụlọ ọrụ Russia. Site na ọnụ ọgụgụ microplants a, a ga -enweta iberibe narị puku mkpụrụ osisi iri anọ n'oge mgbụsị akwụkwọ a.
A na -etinye ọrụ na mmepụta mkpụrụ izizi na ọrụ mpaghara dị mkpa "Mmepe nke mmepụta mkpụrụ nduku". Isi ọrụ ya bụ inye ndị na -emepụta ihe ubi na ndị bi na mpaghara ahụ mkpụrụ nduku nke mmụba dị elu - ruo 40% site na 2025. Taa na mpaghara anyị, oke mkpụrụ osisi ama ama na mpaghara niile poteto nwere bụ 37%. Onu ogugu onu ogugu na Russia bu 15%, na Northwest - 17,7%.
Gọọmentị mpaghara na -akwado mmepe nke mmepụta mkpụrụ mbụ: afọ a, a ga -ekenye nde rubles 4,5 n'ụdị enyemaka site na mmefu ego mpaghara iji kwụghachi akụkụ nke mmefu maka mmepụta minitubers nduku.
“Ịgha mkpụrụ nduku bụ ụzọ dị mkpa n'ọrụ ugbo ọ bụghị naanị na mpaghara anyị, kamakwa na mba. Ekwesiri imeputa nke a iji hụ na nchekwa nri. N'otu ụzọ ahụ dị ka na -eduzi pedigree ọrụ na anụ ụlọ ugbo. Taa, ọ bụ naanị na mpaghara Novgorod na Leningrad, yana n'ugbo nke North Ossetia, a haziri usoro mkpụrụ osisi nduku zuru oke, "Elena Pokrovskaya kwuru.
O kwusiri ike na 12% nke nduku mkpụrụ osisi agbakwunyere na Russia na -emepụta na mpaghara Novgorod.
Ugbo mkpụrụ osisi na mpaghara ahụ abụghị naanị na-enye ndị ọrụ ugbo mpaghara ihe ọkụkụ dị oke mma, kamakwa ha na-eresị mpaghara ha akụkụ nke ngwaahịa ha. A na -amụ okwu gbasara mbupụ ụdị mkpụrụ nduku dị iche iche.
Ndị ọrụ ugbo Novgorod aghọtalarị uru ọrụ dị otu a. Nduku osisi nke elu mmeputakwa na -egosi iguzogide ọrịa, nye ezi zaa ọbụna ọjọọ ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, n'oge ọkọchị a, na mbụ, e nwere ụkọ mmiri ozuzo, mana ugbu a, ubi na -adị ezigbo mmiri mmiri n'ihi mmiri ozuzo. Ndị sonyere na nzukọ nleta ahụ nyochara ubi nke onye isi ugbo Anatoly Lipatov, nyochaa ihe owuwe ihe ubi nke ụdị nduku dị iche iche ga -abụ. Ha kwurịtara okwu maka mmepe n'ihu nke ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere site n'echiche nke iwu gbasara ịmị mkpụrụ, nke a na -emepụta ugbu a na ọkwa gọọmentị etiti.
isi: Ọchịchị nke mpaghara Novgorod
Tags: Novgorod Regionmmepụta mkpụrụ nduku
Nnukwu nchekwa nduku ga -emepe mgbe nrụzigharị na mpaghara Moscow